Izinto ezisetyenziswayo zoNyango, iiBandages neeTape, iBandage yoNyango-ASN
Izinto ezisetyenziswa ngabantu kwezonyango
Inoveli yeCoronavirus (i-2019-nCoV) yeNyukliya yeAcicic Diagnostic Kit (i-PCR-Fluorescence Probing)
Iibhendi kunye neeTape
Ugqirha wokuphosa iteyiphu
Ifayibha yeglasi yokuqengqeleka
Magnesium yokuhlamba iimpahla
I-Anti-coronavirus (COVID-19) yezoNyango kunye neDisp ...
Iimpahla ezizimeleyo ezilahlwayo kwimpahla yokhuseleko ...
I-Crepe Elastic Bandage
I-Huaian ASN Medical Technology Co, Ltd.yishishini elitsha elidibanisa i-R & D, uyilo kunye nemveliso. Unamalungelo awodwa omenzi wechiza ali-15 kwaye ubhengeza amashishini aphezulu obuchwephesha. Inesatifikethi se-ISO 13485, isatifikethi se-EU CE, isatifikethi se-US FDA, kwaye sithatha inxaxheba kwimiboniso emininzi yorhwebo lwangaphandle minyaka le. Ivelisa ikakhulu iimveliso ezinelungelo elilodwa lomenzi ezinje ngebhandeji ezintsha zonyango, ii-bandage zokulungisa, kunye ne-bandage ye-petroleum.
UJeremy Guan, umphathi jikelele we-Huaian ASN technology technology CO., LTD wanika ezifanelekileyo iinkokheli ze-Huai'an District Technology Bureau abeza kwinkampani yethu ukuze baphande kwaye benze uphando bamkelekile ngo-Agasti 26. Iinkokeli ezifanelekileyo zeTekhnoloji Bureau zimamele ...
1.Ukuqina okuphezulu kunye nobunzima bokukhanya: Ubulukhuni be-splint emva kokuphilisa ngamaxesha angama-20 obumdaka bendabuko. Eli nqaku liqinisekisa ulungiso oluthembekileyo nolomeleleyo emva kokuseta kwakhona ngokuchanekileyo. Izinto zokulungisa zincinci kwaye ubunzima bulula, bulingana ne-1/5 yesisindo ...
1. Lungisa indawo eyenzakeleyo uyisongele ngomqhaphu; 2. Vula ingxowa yokupakisha iteyiphu yokuntywila kwaye untywilise ibhanti emanzini kubushushu begumbi obungama-20 ℃ ~ 25 ℃ kangangesithuba semizuzwana emi-4 ~ 8; 3. anyanzelwe ukukhama ukuphuma kwamanzi, umqulu omnye kufuneka usetyenziselwe ukuhlahlela omnye umqulu t ...
ungaqhagamshelana nathi apha!
IDILESI: Umzi mveliso wePaki, i-16th Feiyao Road, i-Huai 'an, Jiangsu